Namory ny tompon'andraikitry ny fandriampahalemana ny Praiminisitra | Primature
Namory ny tompon’andraikitry ny fandriampahalemana ny Praiminisitra
15 novembre 2019 30 mars 2021
Mahazoarivo, ny 15 Novambra 2019 – Nihaona tamin’ireo tompon’andraikitry ny fandriampahalemana manerana ny nosy (OMC au niveau national), ny Praiminisitra Ntsay Christian, androany, teny amin’ny ministeran’ny Raharaham-bahiny Anosy. Fivoriana izay nijerena manokana ny fiomanana amin’ny fanatontosana ny fifidianana Ben’ny tanàna sy ny mpikambana eo anivon’ny filankevitry ny kaominaly na monisipaly izay hotanterahina amin’ny faha-27 n’ny volana novambra ho avy izao.
Ny tanjona dia ny fiantohana ny fandriampahalemana, hahafahan’ny vahoaka misitraka ao anatin’ny fitoniana ny zo hifidy.
Araka ny fanazavàna nentin’ny Praiminisitra dia hahetsika avokoa ny mpitandro ny filaminana eran’i Madagasikara, mialoha, mandritra ary aorian’ny fifidianana, ary hatao ho ampy ny isan’izy ireo.
Fanapahan-kevitra telo lehibe momba io fifidianana io no noraisina mifandraika amin’izany ka ny voalohany dia ny fanatevenana ny isan’ny mpitandro ny filaminana, na aty an-drenivohitra izany na any ambanivohitra.
Ny faharoa dia ny fanamafisana ny fiarovana ireo toerana miantoka ny fanatanterahana ny fifidianana, izy ahiahiana hiharan’ny ankasomparana. Nanambara ny Praiminisitra fa tokony hanaraka ny didy aman-dalàna ny tsirairay, indrindra eo amin’ny fanaovana fampielezan-kevitra: ohatra amin’izany ny tokony hanaovana filazàna mialoha ny amin’ny toerana hanaovana fampielezan-kevitra. Efa madiva hifarana izany fotoana izany, hoy ny Praiminisitra, ka ilaina ny fametrahana lamina eo amin’ny fitandroana ny filaminana.
Ny fahatelo dia ny fanamafisana ny fanentanana ny vahoaka Malagasy mpifidy mba hijery mialoha ny toerana izay handatsahany vato; efa misy hoy ny Praiminisitra, ny fanentanana ataon’ny Ceni sy ny ministeran’ny Atitany nohon’ny tsy fahafantaran’ny maro ny toerana hanatanterahany ny fifidianana, nefa mbola misy ihany koa ny fandaminana isan-karazany mahakasika ny fifidianana, ka tokony handray andraikitra avokoa isika, hoy ihany ny Praiminisitra. Manoloana izany dia nanao antso avo tamin’ny vahoaka Malagasy ny tenany, mba tena hiatrika ny fifidianana sy hifidy an-kahalalahana satria iaraha-mahalala hoy izy fa fifidianana akaikin’ny vahoaka ny fifidianana Ben’ny tanàna. Nohazavainy araka izany fa ny Ben’ny tanàna dia anisan’ny fototra izay hametrahana ny fitsinjaram-pahefana ka antenaina fa ho tanteraka ao anatin’ny filaminana sy fitoniana avokoa ny fametrahana ny birao-pifidianana, na ireo fitaovana ho entina manatanteraka ny fifidianana na ny fampielezankevitra.
Marihina fa noresahina nandritra io fivoriana io ihany koa ny momba ny fihaonan’ny Barea amin’i Ethiopie rahampitso. Efa misy, hoy ny Praiminisitra, ny lamina napetraky ny mpitandro ny filaminana mba tsy hisian’ny tranga mampalahelo toy ny teo aloha intsony, ka nanao antso avo izy ny amin’ny tokony hanarahan’ny rehetra ny fandaminana.
← Revue de la phase 2 du programme de la consolidation de la paix à Madagascar
Visite de l’Ambassadeur de Suède →
Atrikasa fametrahana ny fomba fiasa vaovao eo anivon’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Tetibola